Isilinda seJumbo, China Isilinda seJumbo abavelisi, abaXhasi, Umzi mveliso - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Iisilinda ze SinoCleansky jumbo ziveliswa ngokwe-ISO11120, DOT, okanye ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo lehlabathi.
Uxinzelelo oluphezulu iisilinda zejumbo zisetyenziswa kakhulu kugcino lwegesi, kumatshini wesikhululo seCGG, kwezothutho, kwiziko lokuvelisa amandla, kumzi mveliso, njl.
Umthamo omkhulu wokugcina, ubungakanani obahlukeneyo, ukhuseleko kunye nokuthembeka, ukusebenza okuzinzileyo, ukuthuthwa ngokulula, inkangeleko entle, ubhetyebhetye.
Uhlobo oluqhelekileyo lwesilinda enobunzima be-13.7mm
Uxinzelelo Test (MPa)
Iisilinda zejumbo zinokuthunyelwa zizikhongozeli eziqhelekileyo, izikhongozeli ezivulekileyo eziphezulu ngokusekwe kubungakanani. Iisilinda ziya kusiwa ngokhuselo olukhethekileyo ukuba zikhona.
Isilinda ingasetyenziselwa i-CNG kunye neegesi ezahluka-hlukeneyo ezifana neArgon, iNitrogen, iHelium, iHydrogen, iGesi ecociweyo njl.
Kuba ivelufa, singakwazi ukubonelela brand Chinese okanye brand ngamazwe (ezifana Parker, DK njl). Ezinye izinto, sinokubonelela ngoluhlu lokuba ukhangele xa uthenga kuthi.